Dowlada Ugandha oo sheegtay inay ciidamo badan u diri karto Somaliya • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Dowlada Ugandha oo sheegtay inay ciidamo badan u diri karto Somaliya
Dowlada Ugandha oo sheegtay inay ciidamo badan u diri karto Somaliya
Dowlada Ugandha ayaa sheegtay in ciidamo badan oo ah kuwa militariga oo si khaas ah loo tababaray ay u diyaarisay in loo diro dalka Soomaaliya.
War shalayÂ kasoo baxay Wasaarada Gaashaandhiga ee Dowlada Ugandha ayaa lagu sheegay in ciidamo gaaraya 10 kun oo askari oo dheeraad ah ay Dowlada Ugandha u heyso oo ay ku kordhin karto ciidamada AMISOM ee ku sugan magaalada Muqdisho.
Dowlada Ugandha ayaa horey u qorsheysay in bilaha soo socda ay ciidamo gaaraya 2 kun u dirto AMISOM, balse hadalka kasoo yeeray Kambala ee ku aadan ciidamadan badan ee sheegtay inay soo diri karto ayaa kusoo beegmaya xili ay Qaramada Midoobay iyo Midowga Yurub ku mashquulsan yihiin sidii ciidamo dheeraad ah loogu diri lahaa Soomaaliya.
Todobaadkan ayaa dagaaladii ka dhacay magaalada Muqdisho waxaa lagu dilay 4 kamid ah ciidamada AMISOM ee kasoo jeeda dalka Ugandha.
Dowlada Ugadha ayaa codsaneysa in laga kaalmeeyo dhanka dhaqaalaha sidii ciidamadaasi loo geyn lahaa dalka Soomaaliya, isla markaana mushaharkooda ay meel ku qoraan Beesha Caalamka.Â Midowga Afrika ayaa horey u ansixiyey in la kordhiyo ciidamada AMISOM ee ku sugan Soomaaliya.